Maitiro Ekumisikidza Subtitles paYouTube? ▷ ➡️ Vateveri ▷ ➡️
Maitiro ekumisikidza zvinyorwa zvidiki paYouTube?
Dai 12, 2021 0 mashoko 535
Shandisai ma subtitles emuvhidhiyo yakatumirwa paYouTube zviri nyore. Kana iwe usingazive kuzviita, usanetseke. Tichakudzidzisa zvese nezve ichi chinonakidza chishandiso chinosanganisira inozivikanwa kufambisa vhidhiyo chikuva uye inotibvumidza kuona zvirimo mune mumwe mutauro.
Subtitles paYouTube haishande kune chete nzwisisa iwo mavhidhiyo ari mune mimwe mitauro asi zvakare iri sarudzo inoshamisa kune avo vane imwe mhando yekunzwa kwekunzwa. Nhasi tinokuratidza iyo yakapusa uye inokurumidza nzira yekumisikidza iri basa kubva paPC kana iyo APP.
Nei zvinyorwa zvidiki zvakakosha paYouTube?
Vazhinji vashandisi havasati vanzwisisa kukosha kwemanyorerwo mukati meiyo YouTube chikuva. Zvinogona kubatsira munguva idzodzo kana tichida kutamba vhidhiyo mune mumwe mutauro kana kungoti tiri munzvimbo ine ruzha rukuru uko zvisingaite kunzwa odhiyo yevhidhiyo.
Subtitles zvakare uve imwe nzira yakanaka kwazvo mune izvo zviitiko zvatinozviwana tiri munzvimbo dzisinganzwiki kana kusanzwika nemavhidhiyo.
Chero chingave chikonzero, chakakosha ndechekuti YouTube inotipa sarudzo yekumisikidza zvinyorwa zvidiki. Maitiro ekuzviita akapusa uye anokurumidza, uye chakanakisa pane zvese ndechekuti isu tichakwanisa kuimisa kubva kuPC kana kunyangwe kubva kunharembozha.
Shandisai ma subtitles kubva paPC
Kugonesa zvinyorwa zvidiki paYouTube kubva pakombuta yedu Tiri kungoda komputa ine internet yekubatanidza. Izvo hazvizove zvakakosha kurodha pasi mamwe maapplication kana zvirongwa. Heano matanho atinofanira kutevedzera:
Vhura Youtube kubva paPC browser yako nekupinda youtube.com
Tsvaga vhidhiyo yaunoda kutamba
Dzvanya pa icon "setup”Izvo zvinowoneka pazasi pehwindo rekutamba.
Dzvanya pa "Subtítulos"
Sarudza yakanyanya kusununguka maererano nemutauro
Kugadzirira. Vhidhiyo yacho yave kuzoita kuti ma subtitles avhurwe
Panyaya yekuda dzima zvinyorwa zvidiki muvhidhiyo iwe unongofanirwa kudzokorora imwe neimwe yematanho akatsanangurwa pamusoro uye uncheck the "subtitles" bhokisi:
Batidza zvinyorwa zvidiki kubva kune chishandiso cheIOS
Maitiro ekumisikidza zvinyorwa zvidiki kubva kune chishandiso cheIOS zvakare zvakareruka. Kana iwe uchiri kusaziva maitiro ekuzviita, teerera kune nhanho nhanho iwe yaunofanirwa kutevedzera:
Vhura Youtube pane yako iOS chishandiso
Nzvimbo uye utambe vhidhiyo yaunosarudza
tinya pamusoro pematombo matatu akamira anowoneka mukona yekumusoro yekurudyi kwescreen.
Dzvanya pane subtitle sarudzo (CC) uye sarudza chakakodzera kwazvo maererano nemutauro.
Shandisa zvinyorwa zvidiki kubva kuApple app
Kubva kuYouTube mobile application yeApple zvakare zvinokwanisika kumisikidza zvinyorwa zvidiki zvepi vhidhiyo:
Vhura iyo Youtube application pane yako nhare
Tsvaga uye bereka vhidhiyo yezvaunofarira
tinya pamusoro pematanho matatu akamira (kumusoro kurudyi kona)
1 Nei zvinyorwa zvidiki zvakakosha paYouTube?
2 Shandisai ma subtitles kubva paPC
3 Batidza zvinyorwa zvidiki kubva kune chishandiso cheIOS
4 Shandisa zvinyorwa zvidiki kubva kuApple app
Nzira yekugadzira banner yeYouTube?
Mashandisiro ekushandisa YouTube's incognito mode?